Zaista - Sérvio - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: zaista (Sérvio - Birmanês)
zaista vam kaem da æe ovo sve doæi na rod ovaj.
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဤအရာများတို့သည် ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။
zaista æe vas karati, ako tajno uzgledate ko je.
သင်တို့သည် လျှို့ဝှက်၍ သူ့မျက်နှာကို ထောက်လျှင်၊ စင်စစ်သင်တို့ကို ဆုံးမတော်မူမည်။
ako vas, dakle, sin izbavi, zaista æete biti izbavljeni.
ထိုကြောင့် သားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လျှင်၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်။
zaista vam kaem: nad svim svojim imanjem postaviæe ga.
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အရှင်သည် မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကို ထိုကျွန်၌ အပ်လိမ့်မည်။
zaista vam kaem: postaviæe ga nad svim imanjem svojim.
koji govorahu: zaista ustade gospod, i javi se simonu.
စုဝေးသောသူတို့ကလည်း၊ သခင်ဘုရားသည် အမှန်ထမြောက်တော်မူပြီ။ ရှိမုန်အား ကိုယ်ကိုပြတော် မူပြီဟု ပြောဆိုလျှင်၊
zaista, treba kazati bogu: podnosio sam, neæu vie greiti.
အကျွန်ုပ်သည် ဆုံးမတော်မူခြင်းကို ခံရပါပြီ။ နောက်တဖန် မပြစ်မှားပါ။
jer se zaista ne primaju andjeli, nego se prima seme avraamovo.
အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်တမန်တို့ကို မစတော်မူသည်မဟုတ်၊ အာဗြဟံအမျိုး ကို မစတော်မူ၏။
govoreæi: zaista blagosiljajuæi blagosloviæu te, i umnoavajuæi umnoiæu te.
ငါသည်သင့်အား အစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်။ သင့်ကို အစဉ်အမြဲပွါးများစေမည်ဟု ကျိန်ဆို တော်မူ၏။
a on odgovarajuæi reèe im: zaista vam kaem: ne poznajem vas.
အရှင်ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြောလေ၏။
zaista vam kaem da ovaj narataj neæe proæi dok se ovo sve ne zbude.
ငါအမှတ်ဆိုသည်ကား၊ ယခုဖြစ်သော လူများမကုန်မှီ ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည် ဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယခုဖြစ်သောလူများ မကုန်မှီ ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။
zaista, zaista vam kaem: koji veruje mene ima ivot veèni.
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။
a mnogi od naroda èuvi ove reèi govorahu: ovo je zaista prorok.
zaista vam kaem: ovaj narataj neæe proæi dok se ovo sve ne zbude.
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မှီ ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။
zaista, zaista vam kaem: ko odri reè moju neæe videti smrt doveka.
i reèe mu isus: zaista ti kaem: danas æe biti sa mnom u raju.
zaista ti kaem: neæe izaæi odande dok ne da do poslednjeg dinara.
zaista, znam da je tako; jer kako bi mogao èovek biti prav pred bogom?
မှန်ပါ၏။ ထိုစကားမှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သို့သော်လည်း လူသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အဘယ် သို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်သနည်း။
a petar otvorivi usta reèe: zaista vidim da bog ne gleda ko je ko;
ထိုအခါပေတရုသည် နှုတ်ကိုဖွင့်၍၊ အကယ် စင်စစ် ဘုရား သခင်သည် လူမျက်နှာကို မှတ်တော်မမူ။
makikipag lamay (Tagalo>Inglês)bina ayat memberanikan diri (Malaio>Chinês (simplificado))sacche (Italiano>Espanhol)सेक्सी वीडियो फुल (Hindi>Inglês)tagalog to ilocano dictionary free download (Inglês>Tagalo)meldung an gläubiger (Alemão>Italiano)lepre (Francês>Inglês)i wish i knew how to quit you! (Inglês>Hindi)soap (Inglês>Croata)less firm (Inglês>Árabe)mor falch ohonot ti (Galês>Inglês)hoake tatou (Maori>Inglês)tanh (Ucraniano>Polonês)caver (Inglês>Holandês)hinayaan ito (Tagalo>Inglês)discipline (Romeno>Espanhol)hävitatakse (Estoniano>Romeno)सेक्सी पिचर video open bp (Inglês>Hindi)😊no seas niño (Espanhol>Inglês)your life best moment you only give your friend (Inglês>Hindi)casa del sol (Quechua>Espanhol)ubo at sipon at lagnat (Tagalo>Inglês)segala kerjasama amat dihargai (Malaio>Inglês)woh school ja raha hoga (Hindi>Inglês)